Global Voices teny Malagasy · 10 Septambra 2008
10 Septambra 2008
Tantara tamin'ny 10 Septambra 2008
Tselatra · Arabia Saodita10 Septambra 2008
Singapaoro10 Septambra 2008
Raha nanambara ireo toerana 11 vaovao hametrahana ny mpiasa vahiny ny goverinemanta tamin'ny herinandro teo dia tsy faly ny mponina avy amin'ny saranga antonony amin'ny manodidina ny zaridainan'i Serangoon. Niara-nientana tamin'ny fanangona-tsonia haterina any amin'ny solombavambahoakany ao an-toerana George Yeo sy Lim Hwee Hua ry zareo — nilaza moa ny...
Tselatra · Kenyà10 Septambra 2008
Arimenia: fifandraisana amin'i Torikia, ahoana indray ny manaraka?
Tselatra · Armenia10 Septambra 2008
Taorian'ny fitsidihana manantantara nataon'ny filoha Tiorika Abdullah Gul tany Yerevan tamin'ny faran'ny herinandro teo hanatrika ny lalao fifanintsanana ho amin'ny amboara erantany nifanaovan'i Arimenia sy Torikiateo akaikin'ny filoha tompontany ; Serge Sargsyan, Security in the Caucasus no manadihady ny dingana manaraka eo amin'ireto firenena roa mifanakaiky nefa mifampihafahafa ireto.
Jamaïka, Guyana : Makotroka ny fodian'i Bolt any an-tanindrazana
Karaiba10 Septambra 2008
The rain didn't stop Usain Bolt's return ‘back a yawd’. People lined the road from Norman Manley Airport all the way to the Jamaica Pegasus Hotel in New Kingston “Tsy nahasakana ny fodian'i Bolt aty amin'ny tanàna ny filatsahan'ny orana. Vory lanona ny olona eran'ireo arabe izay manasaraka ny seranam-piaramanidina Norman...